बालकोटमा आखिर के पाकिरहेको छ ? « Ok Janata Newsportal
बालकोटमा आखिर के पाकिरहेको छ ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि फुर्सदिला बनेका ओलीले एमालेका बाँकी कामहरुलाई निरन्तरता दिएका हुन् । त्यसबीचमा भर्खरै एमालेको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
ओली प्रायः आफ्नै निवास बालकोटमा नेता, कार्यकर्ताहरुको भेटघाटमा तल्लीन बन्ने गरेका छन् । नजिकिँदै गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मत प्रक्षेपणमा नमिठो महसुश गरिरहेका ओली प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बलपूर्वक लागेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सर्वेसर्वा र अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि ओलीको निर्णयमा चुइक्क बोल्ने नेता, कार्यकर्ता छैनन् । कसैले पनि अध्यक्षको निर्णयमा अवरोेध सिर्जना गर्दैनन् ।
यो बीचमा पनि ओलीले एमालेलाई थप शक्तिशाली तुल्याउने अस्त्र खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि एमसीसी महत्वपूर्ण कडी हुने एमालेको विश्वास छ । सोही अनुरुप एमसीसीको बारेमा एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । तर, सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरेको कांग्रेस एमसीसी पारित गराउनका निम्ति हरदम लागेको छ ।
सत्तासीन दलभित्रकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनेको नेकपा एस जनताका एजेण्डामा प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । नेकपा एसले एमसीसीको बारेमा धारणा सार्वजनिक नगर्नु नै जनताको सेन्टिमेन्टलाई बुझ्नु मान्न सकिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा बनाउन कांग्रेसको दबाब देखिन्छ । भर्खरै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बालकोटै पुगेर ओलीसँग भेट गरेका छन् । भेट निष्कर्षविहीन भएपछि पौडेल त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पनि अब ओलीलाई भेट्नका निम्ति बालकोट जाँदैछन् । आखिर ओलीसँग सबैलाई तान्ने अस्त्र के छ, खुल्दुली पैदा भएको छ ।